Vatashanyi Vokumusorosoro Vakatarisa kuOdisha | Tribal, Buddhist & Textile
Odisha inyika yekushanyirwa kwekutambira nzvimbo. Kubva pamahombekombe kuenda kumahombekombe, misha yemhuri kuenda kumataundi emagetsi, zvivako zveBuddhist kumatemberi ekare, mapaki ezvipfuwo kune zvinyorwa zvesango, zvivako zvezvikomo zvikomo.
General Information: Nguva yakanakisisa yekushanyira: Zvakanaka kuva nerudzi rwekufamba pakati peOctober - March. Inofarira nzira yekufambisa: Toyota-Innova / Tavera / Scorpio / Tempo Mufambi zvichienderana nehukuru hweboka. Tinoronga nzvimbo dzekugara hotera mumadzinza uye nguva dzose edza kupa makamuri akakwirira / mahotera munzvimbo idzi kuitira kuti ugone kuwana huwandu hunyaradzo.
Ratnagiri yaimbova nzvimbo yeMahavihara, kana guru guru revahedheni veBhudha, muBrahmani neBuupa rwizi rwomupata muJajpur ruwa Odisha, India. Yaiva chikamu cheYunivhesiti yePuspagiri, pamwe naLalitgiri uye Udayagiri. Ratnagiri yakasimbiswa pasina mushure mekutonga kweMambo weGupta Narasimha Baladhya muhafu yekutanga yezana remakore rechitanhatu CE, uye yakabudirira kusvikira muzana ramakore rechigumi nemaviri CE.
Dombo reMatombo Textile Tours richakuratidza izvi nezvimwe zvakawanda. Our Odisha Textile Tour ne Golden Triangle ndiyo nzira inofanirwa kuva nayo. Ndiyo chirongwa chekushanyirwa kwezuva re14 uye inosanganisira Bhubaneswar, Nuapatna, uye Maniabandha inozivikanwa neOlasingh Textile Village, Chikiti Textile Village, Sambalpuri Textile Villages dzakapoteredza Sagarpalli neButtupalli, Barapalli Textile Village, Attabira Textile Village, Sericulture Projects, uye Tussar Silk Village seFatipur